मौसम परिवर्तन भनेको के हो? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तन भनेको के हो?
निश्चित रूपमा तपाईले हालका वर्षहरूमा धेरै चोटि मौसम परिवर्तन र यसका परिणामहरू मध्यम र दीर्घकालीन परिणामहरूमा सुन्न सक्नुहुनेछ। तर, के तपाईंलाई यो शब्द आफैंले भनेको हो भन्ने कुरा साँच्चिकै थाहा छ र यदि यो उनीहरूले भने जस्तो गम्भीर छ भने?
वास्तविकता यो छ कि जलवायु परिवर्तनहरू सँधै आउँदछन्, किनकि यो अत्यधिक कारणले गर्दा जलवायुको दीर्घकालीन संशोधन बाहेक अरू केहि पनि छैन सबै पृथ्वी को सतह को वार्मिंग। प्राकृतिक अवस्था अन्तर्गत यो एक सामान्य प्रक्रिया हो, विश्वको विशिष्ट, तर हालका दशकहरूमा मानिसहरूले यसलाई तथाकथित ग्रीन हाउस प्रभावको माध्यमबाट बढाएका छन। तेसैले, मौसम परिवर्तन भनेको के हो?
1 मौसम परिवर्तन भनेको के हो?
1.1 मुख्य कारणहरू
2 प्राकृतिक कारणहरू
3 एन्थ्रोपोजेनिक कारणहरू
4 वर्तमान मौसम परिवर्तनको नतीजाहरु
4.1 जीवित प्राणीहरूमा प्रभाव
4.2 पृथ्वीमा परिणामहरू
मौसम विज्ञान अनुसन्धानको एक व्यापक र जटिल क्षेत्र हो, त्यस पछि मौसम कहिल्यै स्थिर छैन, र यो त्यस्तो कुरा हो जुन हामी आफैंले noticeतुहरू र दिनहरूको पनि बित्दै जान्छौं। त्यहाँ धेरै कारकहरू सामेल छन्: उचाई, भूमध्यरेखाबाट दूरी, समुद्री धाराहरू, अन्यहरू। जब हामी 'मौसम परिवर्तन' को कुरा गर्छन् हामी संदर्भ गर्दछौं स्थलीय जलवायुमा दीर्घकालीन वैश्विक भिन्नता। यो शब्द १ 1988 XNUMX मा वैज्ञानिकहरूको समूहले तयार पारेको थियो जसले निरन्तर कार्बन उत्सर्जनले प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनलाई गति दिइरहेको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगे।
यी विशेषज्ञहरु रिपोर्ट को एक श्रृंखला उत्पादन कि मुख्य सरकारहरु को पालन ​​गर्नुपर्दछ यदि तिनीहरू विनाशकारी प्रभावहरू अगाडि बढ्न चाहँदैनन्।
मौसम परिवर्तनको कारण हुन सक्छ प्राकृतिक o एन्थ्रोपोजेनिकभनिएको छ, मानव कार्य को द्वारा।
मुख्य प्राकृतिक कारणहरू मध्ये हामी निम्न पाउँछौं:
उल्का वा क्षुद्रग्रह प्रभाव
ती सबैले कुनै समय एक ठूलो जलवायु परिवर्तनको कारण बनेको छ। उदाहरण को लागी, Million 65 करोड वर्ष पहिले एउटा ग्रहले पृथ्वीमा ठक्कर दियो र आइस एजको कारण समाप्त भयो, केही डायनासोरहरू सफा गर्दै जुन प्रकोप पछि जीवित थिए। हालसालैको समयमा, यो सिद्धान्त झन झन स्वीकार्य छ कि १२,12.800०० वर्ष अघि मेक्सिकोमा प्रहार गर्ने उल्का पिण्डले उहि कारणले भयो।
यो बोल्न सम्भव थिएन कि मानिसले मौसम परिवर्तनलाई अझ तीव्र पार्न सक्छ el Homo sapiens ज the्गलको खेती गर्न सुरू हुनेछ तिनीहरूलाई जमिन मा परिणत गर्न। यो सत्य हो कि त्यस समयमा (करिब १० हजार वर्ष अगाडि) मानव जाति million० लाख भन्दा बढी थिएन, यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, तर पृथ्वीमा पारेको प्रभाव आजको भन्दा धेरै कम थियो।
हामी हाल billion अर्ब व्यक्तिको पहुँचमा पुगेका छौं। र हामीले यस ग्रहलाई के गरिरहेछौं त्यसले यसको असर लिन थालेको छ किनकि औद्योगिक क्रान्तिदेखि हामीले कार्बन डाइअक्साइड वा मिथेनजस्ता ग्यासहरूको उत्सर्जन बढेको छ, जसले हरितगृह प्रभाव बिगार्न योगदान पुर्‍याउँछ। तर, यसमा के समावेश छ?
जब यो प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्दै, सन्दर्भलाई बनाइन्छ वातावरणमा सूर्यको ताप को प्रतिधारण यसमा फेला परेको ग्यासहरूको तहबाट (जस्तै CO2, मीथेन, वा नाइट्रस अक्साइड)। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यसको प्रभावबिना जीवन हुन सक्दैन जुन हामीलाई थाहा छ, किनकि यो ग्रह एकदमै चिसो हुने थियो। प्रकृति संतुलन उत्सर्जनको जिम्मामा छ, तर हामीले तिनीहरूलाई गाह्रो बनाएका छौं: गत शताब्दीदेखि हामीले उत्सर्जन 30०% ले वृद्धि गरेको छ.
आज व्यावहारिक रूपमा सबै वैज्ञानिकहरू सहमत छन् कि हाम्रो ऊर्जा उत्पादन र खपतको मोडले जलवायु परिवर्तन गर्दैछ, जुन परिणामस्वरूप परिणामित हुन्छ पृथ्वीमा गम्भीर प्रभाव र यसैले, हाम्रो जीवन को मार्ग मा.
जलवायु परिवर्तनको अन्तर-सरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को पछिल्ला रिपोर्टका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकरात्मक नतिजा पृथ्वीभरि नै महसुस हुन थालिसकेको छ। २० औं शताब्दीमा तापमान ०.º डिग्री सेन्टिग्रेड बढेको छ, र समुद्री सतह १० देखि १२ सेन्टिमिटरसम्म बढेको छ। पूर्वानुमान कुनै आशाजनक छैन: २१ औं शताब्दीमा ०..0,6 र degrees डिग्री बीचको तापक्रम र २ level र 10२ सेन्टिमिटर बीचको समुद्री सतहमा वृद्धि हुने अनुमान गरिन्छ।
वर्तमान मौसम परिवर्तनको नतीजाहरु
हामीलाई थाहा छ तापक्रम बढ्न लागेको छ, तर हामीले सामना गर्नुपर्ने कुरा के हो? धेरै रमाइलो मौसम भनेको धेरै मानिसहरूका लागि शुभ समाचार हुनसक्दछ, तर सत्य यो हो कि हामीले यस संसारको परिणामलाई सँधैका लागि तयार गर्नुपर्नेछ जसले हाम्रो संसारलाई सदाको लागि बदल्न सक्दछ।
जीवित प्राणीहरूमा प्रभाव
मृत्यु, रोग, एलर्जी, कुपोषण, ... संक्षेपमा, हामीलाई मन नपर्ने सबै थोक उच्च तापमानको कारण बढ्नेछ। थप रूपमा, नयाँ रोग देखा पर्दछ, र ती जो सामान्यतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रहरूमा केन्द्रित थिए, मध्य अक्षांश तिर बढ्नेछ.
बोटबिरुवा र जनावरहरु पनि प्रभावित हुनेछ: वसन्त घटनाहरू, जस्तै फूल फुल्ने वा अण्डा पार्ने चाँडो आउँनेछ। केहि प्रजातिहरू प्रवास गर्न रोक्दछन्, र अरूले त्यसो गर्न बाध्य हुनेछ यदि तिनीहरू बाँच्न चाहन्छन्।
सीओ २ उत्सर्जन बढाउँदा, सागरले पनि यस ग्यासको अधिक शोषण गर्दछ एसिडिफाइड हुनेछ। परिणाम स्वरूप धेरै जनावरहरू जस्तै कोरल वा सिपाहीहरू नष्ट हुन्छन्। उच्च अक्षांशमा, शैवाल र प्लान्क्टनको मात्रा परिवर्तन हुनेछ।
तल्लो द्वीप र तटहरू जलमग्न हुनेछ समुद्री सतह बढेको कारण; र धेरै क्षेत्रहरूमा बाढी उनीहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा चिन्ताको समस्या हुनेछ।
अर्कोतर्फ, खडेरी बढ्नेछ ती क्षेत्रहरूमा जहाँ वर्षाको अभाव भइसकेको छ।
तपाईंले हेर्नुभएकै, जलवायु परिवर्तन एकदम गम्भीर कुरा हो र जुन सबैलाई सचेत हुनुपर्दछ, विशेष गरी ठूला विश्व शक्तिका नेताहरू। मध्यम अवधिमा, ग्रहले अपूरणीय परिणामहरूको एक श्रृंखला भोग्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तन भनेको के हो?
अलेजेन्ड्रा वालोइस अल्माजान भन्यो
म एउटा बुबा र चासो देख्छु तर हामी कसरी क्लाइमेट परिवर्तनबाट बच्न सक्छौं
अलेजेन्ड्रा वालोइज अल्माजानलाई जवाफ दिनुहोस्
मौसम परिवर्तन भएको छ र सधै हुनेछ। वर्तमानमा, मानवले यसलाई चाँडो गर्न र यसलाई नराम्रो बनाउन धेरै गरिरहेको छ।
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन प्रकोपबाट बच्न सकिन्छ:
-केयर र वातावरण संरक्षण
- पानी र हामीसँग भएका सबै प्राकृतिक संसाधनहरूको राम्रो उपयोग गर्नुहोस्
- जब हामी सक्दछौं, वा रीसायकल प्रयोग गर्नुहोस्
- हाम्रो क्षेत्रबाट ब्य उत्पादनहरू (हरेक दिन ठूला शपिंग सेन्टरहरू अन्य देशहरूबाट ल्याइएको उत्पादनहरूले भरिन्छन्; कि तिनीहरू डु boats्गा र / वा विमानमा आएका छन् जसले वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने ग्यासहरू उत्सर्जन गर्दछ)।
MJ Norambuena भन्यो
मैले यो लेख एकदम उपयोगी पाए तर तपाईले आफ्नो स्रोतका सूचनाहरू के भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईले भनेको कुरामा म शting्का गरिरहेको छैन (वास्तवमा, म यसलाई साझा गर्छु) तर विज्ञानको संसारमा वैज्ञानिक साहित्यबाट समर्थन हुनु राम्रो हुन्छ। यस तरिकाले तपाईले अधिक व्यक्तिहरूलाई वास्तवमै चिन्ने (वैज्ञानिकहरू) को बारेमा पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछन् र उनीहरूले सुन्ने वा पढेका कुराहरूमा एक्लै नहुनु जुन (जुन धेरै चोटि निराधार धारणा हुन सक्छ)।
MJ Norambuena लाई जवाफ दिनुहोस्
मैंग्रोभ्स, तूफानको बिरूद्ध प्राकृतिक संरक्षण